I-Cancer neCapricorn zihluke kakhulu, oku kunjalo. I-Crab inomdla kunye ne-emotionally wavy, ngelixa i-Goat Sea Cappy ijwayele ukuba yindoda epholileyo ekuthandeni. Ukuba baqonda into engakumbi kwaye baxhomekeke kuyo kuyo nayiphi na iziqalo ezinzima, ezinye iimpawu ezifanayo ziqala ukuzibonakalisa.
I-Cancer neCapricorn ziphikisana ngokubanzi kwivili laseZodia . Kodwa ngamanye amaxesha lolu hlobo lomdlalo lunomlingo olungalindelekanga, njengoko ngamnye ubona indlela yokukhula ukuya kwelinye.
Luhlobo luthando olunokukhula ngaphezu kobomi bonke.
I-Cancer-Capricorn yintlanzi, ene-resonance yayo ekhethiweyo ngelixa ibonakala iyichasene ngokupheleleyo.
I-Cancer iyatshintshwa kakhulu, kwaye ukuguquka kwemizwelo kwenza uCapricorn aqaphele. Kungenxa yokuba iCapricorn ayiyi kutyalombela kwinto engaqinisekanga - inqwenela ukuqinisekisa ukuba iqabane layo. Ukusuka kwikhonkco leCrab, uCappy ubheka indlela enzulu kwaye ujolise kakhulu kwimicimbi yehlabathi.
I-Cancer ngoLuthando ngumcingi ocinga, ocingelayo kunye novelwano.
I-Capricorn in Love yindabuko, ikhuselekile kwaye iyanceda.
Ngokuqhelekileyo umdlavuza unenkathazo ngokungakhuselekanga, kwaye xa bevula, badinga imvume enkulu. I-Capricorn inokuthatha inxaxheba yecalaji kule meko, kunye neCarcer engumntwana ongenanto okanye ohluphekileyo. Kunzima kuCapricorn ukuhlonipha ukuxhomekeka, kwaye umdlavuza usoloko uneengxaki ezinxulumene nokuma ezinyaweni zakhe ezimbini.
I-Cancer ilawulwa yiNyanga , kwaye nje ngokunyuka kunye nokuhla, ngokukhwabanisa nokukhupha imizwa.
I-Cancer ingasebenzisa amandla azinzileyo ebomini babo, isikhokelo sothando esinethemba kwihlabathi lenene.
Ngokwahluke kakhulu, iKapricorn ilawulwa nguSaturn , iplanethi yokuseka umyalelo kunye nokuphumelela ngokukhawuleza. I-Capricorn inokunciphisa, kunye nokuxhaswa kweembambano ngobomi bentlalo-yentlalo kunye neCancer ecocekileyo ebomini babo.
Kwimeko enhle kakhulu, bayabelana ngokukhululekile noko abanye abafunayo kwaye baqulunqe.
Ngenxa yokuba umdlavuza kunye neCapricorn zibonakaliso zekhadali (inkokeli), kukho umngcipheko wee-alphas eziphazamisayo. Ngamanye amaxesha isebenza, kuba umdlavuza unomdla wokuzimela. Ukuqonda umrhumo ngamnye kunokunciphisa imizabalazo yamandla xa kukho intlonipho.
Ihlobo lohlobo lweHlabathi lokuThumela
Ukutshata kubaluleke kakhulu kwiCarcer neCapricorn, kwaye ngaphandle kwendawo yokugcinwa kwabo, okwabakho into ekhethekileyo ingadalwa. I-Cancer ichukunyiswa yizicwangciso zobuqili zeCapricorn, ogxile kwi-career ekubhenkisweni kwiCrab isidingo sokuzinza.
Igcinwe iCapricorn ivuseleleke kwiCarcer's feelingsy, kunye nokukhuthaza iindlela. Bobabini bajongwa njengendabuko kwaye bafuna uthando oluhlala ixesha elide, olunokuthi lithetha ukuthandana. Bakhangele into eqinisekileyo, umntu oza kutshata imbali kuba besoloko bezibona bezinzile kwiintsapho zabo.
I-Cancer ikhupha ibhere elikhuphayo leCapricorn, kwaye baya kuchitha ixesha elininzi ebusuku. I-Goat idinga iqabane elihlonela ukuzinikela ngokupheleleyo ekuphumeleleni impumelelo yehlabathi. I-Cancer isekela iGoat ngokudala indawo yokuhlala yothando, kunye nokulandela ngokuzimisela zabo iinjongo, ngokunjalo.
Ngokubambisana bayakha ibhangqa elimangalisayo, kunye negunya elivelayo elingaphaya kwesibalo sawo malungu. Abangaphandle banokuziva i-chemistry, beyazi ukuba kukho into esomeleleyo apho.
Ukuba ngabachasayo kulo lonke i-Zodiac, kwaye njengempawu zekhadikhadi , zithwala ubunzulu benzalamizi (uCapricorn) kunye nomatriki (Cancer). Oku kunomdla xa iCapricorn yindoda, kunye neCancer indoda. Bobabili babelana nothando lokuba nenxaxheba kuluntu, lokuba ngabanye, nokwakha ingqiqo yoluntu.
Xa bazinikezele, bangaba nomonde ngazo zonke ezingagqitywanga. Ngamnye uhlala phantsi kwaye ubonisa ubuncwane obungaphakathi, kwindawo enobudlelwane obuzinzileyo.
Baya kukhula ngenjongo ekwabelwana ngayo yokwakha kwisithintelo esinzima kunye nobomi bentsapho kunye nentsapho. I-Cancer ayisoloko iyayiqonda ukunyaniseka kwembuzi kunye nomsebenzi.
Ikhono likaCapricorn ukudala izibonakaliso zempumelelo ziyabakhuthaza kwaye zithuthuzela kwiCrab. Zomibini ziwela emigodini yamnyama, kwaye baya kuqonda oku kuqhubekayo okukrakra komnye. Nangona ingapheli, amathuba, iya kuhlala ibuhlobo obunzulu.
Ngaphesheya: Uhlobo olusondeleyo kwintsapho; ukuzibophelela kubangela uthando oluhlala njalo; iintsika zoluntu; iingcambu ezinzulu ekhaya; zi zikhundla; nothando lwezandla ezenziwe ngesandla kunye nezinto ezakhelwe ukuhlala.
Ngaphantsi: Izinto ezininzi azihambanga; ukuthambekela okukrakra (amanzi kunye nomhlaba uyamkela); amanzi aphefumulayo; ukudandatheka; ukuphathwa; mfihlelo; kuphuza ukutshintsha.
I-Element kunye neCart Cardinal Water (iCapricorn) kunye neCardinal Earth (Cancer)
Uthando lukaLove no-Aquarius
Uthando lweTaurus neVirgo
Confucius and Confucianism - Ukufuna Intliziyo Elahlekileyo
Imvelaphi yegama lesiTaliyane
Iimvo zeRppaccini's Girl '